ubudlelwano Family, kuhlanganise amacala ezehlukaniso alawulwa Ikhodi Family. Kanjani ukuba afuna isehlukaniso, lapho kunendingeko enkulu khona lo oxhumana naye? Kuye izimo ezithile, isicelo ungabhala emagunyeni noma umbhalisi noma inkantolo.
Njengoba isehlukaniso ngokusebenzisa umbhalisi
It wenziwa uma kukhona kokuba kungokuvumelana futhi akukho izingane ezingaphansi kweminyaka engu-18. Kuze kube yimanje, kubalulekile kuphela ukuze ufake wephethishini ehlanganyelwe noma ngabanye 2, uzwakalise ngokubhala. Kulokhu, inqubo kuyokwenzeka ngokushesha, ngaphandle izinkinga.
Njengoba isehlukaniso, ukuthi imibhalo kufanele kube ukunikeza kuya Registrar? Ngaphandle isicelo, uzodinga isitifiketi somshado kanye iphasiphothi.
Ngaphandle kwemvume nezinye womshado angase ahlukanise iziphathimandla umbhalisi uma yokugcina kuthiwa siphelelwe amandla, odonsa isigwebo neminyaka engaphezu kwengu-3, noma njengoba kumemezela ulahlekile. Kuzo zonke ezinye izimo, isehlukaniso Kwenziwa kuphela senkantolo. Ngokusebenzisa izidumbu isehlukaniso umbhalisi Kwenziwa enyangeni eyodwa emva ukuhanjiswa isicelo. ukusheshisa izinqubo akuvunyelwe. Emva kwalesi sikhathi, ulwazi wangena encwadini yokubhalisa wezenzo isimo civil. Khona-ke ukhipha isitifiketi yesehlukaniso yaphambilini owakwakhe.
Njengoba isehlukaniso ezinkantolo
Kuthatha indawo phambi kwezingane ezivamile ezincane, ngokungabi bikho kwemvume umngane womshado, uma kunesidingo, ukuhlukaniswa kwempahla evamile , njll On inkantolo udinga ukunikeza imibhalo ezingaphezu kuka Registrar.
Njengoba isehlukaniso kule ndaba, okufunekayo imibhalo edingekayo ukuze lokhu? Ngaphezu isitatimende kwesimangalo, ama-passport futhi izitifiketi zomshado, zisekhona ezidingekayo: a izingane isitifiketi sokuzalwa ndawonye, ikhophi irejista endlini, eqinisekisa yokuhlala ummangalelwa, kokuthola isimo emsebenzini yokukhokha. Ukuze uthole usizo lochwepheshe futhi isehlukaniso, ungakwazi ukufuna imisebenzi abameli abazokusiza ukuqoqa amaphepha adingekayo. Kodwa, yebo, kuyodingeka bakhokhe.
Ngesikhathi kuqulwa icala, okudinga iqhaza bobabili. Uma kwenzeka ukuthi omunye ongafikanga ngesizathu esihle, umhlangano angase lihlehlisiwe. Mayelana nesikhathi abahlanganyeli umhlangano bayaziswa kusengaphambili. Usuku lomhlangano esimisiwe usuku lokulungisela owandulela ukuqulwa kwecala, kodwa hhayi ngaphambi kwezinsuku ezingama-30 emva nokufakwa isikhalazo. Ngesikhathi kuqulwa icala wafunda zonke izimo ne amaqiniso, futhi uma kunqunywa ukuthi umndeni ngeke ukwazi ukulondoloza umshado eziyoncibilika.
Uma isicelo samukelwe kuphela kusuka kolunye uhlangothi, umlingani ke inganikelwa kwenkathi ethile nokubuyisana (1 kuya ku-3 izinyanga). Lesi sinqumo sithathwe yinkantolo, kanye akusiyo kusebenza kuzo zonke izimo, kodwa ngokubona inkantolo. Lapho iqaphela ukuthi ijaji futhi ukhethe umhlangano, futhi uma isimo ayikashintshi, umshado siphela.
Esimweni lapho abangane bomshado babe nezingane ezincane, kodwa isehlukaniso Kwenziwa isicelo mutual, izizathu isehlukaniso kungukuthi kuyaphenywa. Abashade Unelungelo ukwethula enkantolo isivumelwano, equkethe ulwazi mayelana nabo izingane kuzohlala, kanye nenqubo kwemali ekhokhiwe izindleko zabo. Esimweni lapho lesi sivumelwano ziyophulwa amalungelo engane, noma idokhumenti engekho, inkantolo kufanele thola cishile bani ingane bayophila, ngubani futhi lokho lemali kuyodingeka bakhokhe nesondlo, ngesicelo omunye abashadayo ukwenza ukuhlukaniswa kwempahla.
Umshado kuyothathwa sinqanyuliwe kusukela ngosuku okwaqala ngalo amandla wenkantolo. Lombhalo ucashunwe ebhukwini ngesinqumo, umbhalisi enkantolo uzothumela umzimba lapho Bashada. Kuze kube manje, lo mbhangqwana ngeke unike incwadi yesahlukaniso, ngeke bakwazi ukuphinde ashade.
Uma umshado sahoxiswa nomuntu bashone noma engekho, ingabuyiswa amazwi mutual.
Phakathi naleso sehlukaniso amaqembu futhi kudingeka unqume ukuthi kukhona isidingo ukuhlukaniswa kwempahla. Ngakolunye uhlangothi, khona-ke lonke inqubo kuzothatha isikhathi eside, ngakolunye uhlangothi - uzokwazi ukuba axazulule zonke izingxabano phezu kwempahla. Uma kudingekile, ungenza isigaba inqubo ehlukile, ngemva kwesehlukaniso.